Seed na Blog mkpado? | Martech Zone
Seed na Blog mkpado?
Fraịde, Septemba 26, 2008 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Backlaghachi azụ (snicker) n'oge mmalite nke ịde blọgụ, achọpụtara m na ịza ajụjụ na blọọgụ ndị ọzọ bụ ihe ịga nke ọma. Ihe ka ọtụtụ na-eto eto n'oge ndị ahụ bụ n'ihi nsonye m na mkparịta ụka na blọọgụ ndị ọzọ.
Ọbụna na mmụba nke blog m, m na-aga n'ihu ịnwa ịchọ na ịchọta blọọgụ ọhụrụ ndị na-ede ọdịnaya dị ukwuu na mpaghara ndị nwere mmasị. M na-agbalịkwa ịkwalite ha na njikọ m kwa ụbọchị. Site na narị blọọgụ otu narị ebe, enwere ọtụtụ mkparịta ụka iji sonye.
Gịnị bụ Blog Seeding?
Google na Teknụzụ bụ ụzọ mbụ m si achọta blọọgụ nke m na-agatụbeghị. I nwere ike iwepụta nkeji ise ma ọ bụ iri n’abalị blọgụ blog ma mee ka ekpughere gị ọtụtụ puku ndị ọhụụ ọhụrụ. Mkpokọta Blog na-agbakwunye na nkwupụta nke blọọgụ ọzọ ma hụ na ị nwere ezigbo backlink na ozi ha na-ekwu na blog gị. Ekwula okwu naanị iji tụfuo njikọ gị n'ebe ahụ, n'agbanyeghị - nke ahụ bụ adịgboroja. Dee ederede dị egwu, jaa blogger ahụ mma, ma ọ bụ nye ụfọdụ ihe akaebe ma ọ bụrụ na ị naghị ekwenye na ha. Ihe ị na-ekwu, ọ ga-aka mma.
Blog Seeding dị iche na Comment Spamming
Mkpali nke ntinye akwukwo di iche na ikwu okwu Spamming. Ikwu Spamming bụ okpu ojii SEM usoro iji gbalịa ịchọta blọọgụ ndị na-adịghị eji nofollow ma nweta ọkwa dị elu site na backlinks.
Na-agbakwunye na mkparịta ụka nke blog na ajụjụ. Ikekwe ị na-akwado post ahụ site na iji ọdịnaya agbakwunyere ma ọ bụ na-agbagha ọdịnaya dị n'ebe ahụ. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ onye ọrụ mepụtara ọdịnaya na onye na-ede blọgụ ọ bụla kwesịrị inwe ekele.
Na-ewebata gị na blogger.
Nke ka mkpa, na-ewebata gị ndị na-ege blọgụ! Eledala ọtụtụ mmadụ na-agụ blọgụ NA gụọ ihe ndị a kwuru.
tinye blọgụ blog na akpa gị maka usoro ịzụ ahịa iji wulite ikike ma ọ bụ mata banyere blog, ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma!
Tags: blọgụ blogBloggerịde blọgụ
Sep 27, 2008 na 11:34 PM
Ezigbo post Douglas. Ejirila m usoro a ọtụtụ na-enweghị ọdịda, ọ na-arụ ọrụ! Achọpụtala m na nke gị adịghịdị mkpa ichewe maka idobe njikọ na njikọ nke okwu gị ma ọlị, belụsọ na ịme mgbasa ozi dị oke mkpa maka mkparịta ụka ahụ. Ọ bụrụ na ihe ị ga-ekwu n'ezie mgbasa ozi na mkparịta ụka ahụ, kama ịbụ naanị "m onwe m" ikwu okwu, mgbe ahụ ndị ọbịa ga-enwe mmasị na blog gị.
Ruo na blọọgụ nofollow, blọọgụ m niile enweghị isi na ee, ha na-adọta ọtụtụ ndị spammers. Agbanyeghị, ilekwasị anya na blọọgụ na-enweghị isi abaghị uru maka ndị na-achọ iwulite uto organic. Obere mmelite ogo nke enwetara site na njikọ na-enweghị ntinye na ntanetị na-aza ajụjụ kachasị mma. Ebe ikwu okwu nwere ezi ugwo bu na nmekorita ya na ewuli elu na nkpuru nke obi. Ndị ọzọ ga-adị ngwa iji jikọta gị na post-organically ma ọ bụrụ na ị na-adịghị mgbe niile spam ha kwuru na njikọ.
Akwa post! Got nweela onye gụrụ ọhụụ. 😉
Sep 28, 2008 na 7:24 PM
Dị ka onye na-ede blọgụ novice, ihere na-eme m banyere ịza ajụjụ na blọọgụ ndị ọzọ. Ozi gi doziri m.
Kedu ihe blọgụ na - enweghị atụ na kedu ka m ga - esi mara ma m nwere nke?
Aug 6, 2009 na 10:28 PM
Daalụ Doug. Ama a nyeere m aka nke ukwuu n'ịchọ ịkọwa ọdịiche dị na mkpuru blọgụ na spamming na ndị ahịa m na-azụ ahịa. O mekwaala ka m kwuo okwu banyere ụfọdụ blọọgụ n'onwe m! 🙂
Sep 22, 2011 na 12:32 PM
Maka ebumnuche na-enweghị isi, enweghị m ike ịbanye na Technorati, mana nke ahụ bụ okwu ọzọ.
Ihe ịkọwapụtara na-arụ ọrụ nke ọma maka blọọgụ dị iche iche nke otu onye ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ. Maka blọọgụ ụlọ ọrụ, otu usoro ahụ adịghị arụ ọrụ n'ihi na a na-ahụ blọọgụ ụlọ ọrụ dịka ụzọ isi kwalite azụmahịa ma taa ahụhụ.
Aka m na-ahụ ụlọ ọrụ blọọgụ nwere ọkwa ma ọ bụ nkwupụta dị elu mgbe niile.
Sep 22, 2011 na 1:20 PM
Ọ bụrụ na etinyere blog ụlọ ọrụ na-ere ngwaahịa, ekwenyere m na nkọwa siri ike ị nweta. Agbanyeghị, mgbe blọọgụ nwere nzube na mpụga ahịa, enwere ọtụtụ ohere.
https://blog.facebook.com/ - na - enweta ọtụtụ iri puku kwuru. M na-aghọta na ha bụ ndị na-elekọta mmadụ n'elu ikpo okwu, ezie… na ikekwe isịneke ebe ha nwere ọtụtụ ijeri ahịa 🙂
http://www.lulu.com/blog/ - mgbe ọdịnaya dị mma, ị ga-ahụ obere ọrụ ebe a.
Sep 23, 2011 na 5: 01 AM
Maka blọọgụ ụlọ ọrụ, dịka ị kwuworo, blog kwesịrị inwe nlebara anya karịa ma ọ bụghị naanị ịpịpịa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke ya. M na-ekepụta ọdịnaya dị mma maka blọọgụ ụlọ ọrụ anyị yana ọ na-adị mma nke ọma n'ihe banyere nleta mana ọ bụghị n'ụzọ ọrụ ndị ọrụ.
Aga m anọgide na-anwale ma kelee maka ozi bara uru.
Ọkt 7, 2011 na 10:01 PM
Daalụ Doug! Nke a bụ nnukwu echiche maka anyị niile na-ede blọgụ. Anọ m na-ebipụta na blọọgụ m dị ka ihe omume ntụrụndụ. Ugbu a, amalitere m inweta ndị na-eso ụzọ kemgbe ịgbanyụ Blogspot. Anọ m na-ede ihe, mana etinyeghị m njikọ njikọ blọgụ m.
Daalụ maka ozi ahụ! http://www.nortoncreative.com/rubberchicken/
Jul 11, 2012 na 1:56 PM
Ma na-ekwu okwu iche, olee ihe ọzọ ị ga-akwado maka ịgha mkpụrụ? You na-eji ngwa ọrụ dịka Pinterest? Reddit ka ọ bụ Digg?